अप्रील 14, 2019 अप्रील 14, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments प्लाष्टिक
प्लाष्टिकको आविष्कार अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धमा वेलायती बैज्ञानिक अलेक्जेण्डर पार्केशले गरेका हुन । उनैको नाममा त्यस बेला प्लाष्टिकलाई पार्केजाइन भनिन्थ्यो । पार्केशले यसको आविष्कार नाइट्रोसेलुलोजद्वारा गरेका थिए । प्रारम्भिक प्लाष्टिक अत्याधिक कठोर थियो । यसलाई तेल र कपुर मिलाएर मुलायम वनाइयो । प्लाष्टिक शव्दको उत्पत्ति ग्रिक भाषाको प्लाष्टिककोज शव्दद्वारा भएको हो, जसको अर्थ वनाउन या तयार गर्न भन्ने लाग्न जान्छ । प्लाष्टिक वनाउने व्यापारिक विधिका जन्मदाता भने“लियो ह्यान्ड्रिकस आर्थर बेकलैण्ड”हुन । उनले प्लाष्टिकको निर्माण सन् १९१० मा फिनोल र फर्मल्डीहाइडको रसायनिक क्रिया गराएर वनाएका थिए । यसपछि प्लाष्टिक निर्माणका नयाँ-नयाँ तरिकाहरू आउन थाले । इथाइलिनको बहुलिकरण गरेर पोलीइथाइलिनको निर्माण पनि हुन थाल्यो । प्लाष्टिकको आविष्कार १०,००० (दस हजार) डलर पुरस्कारको लागि गरिएको थियो जसले हात्ती दन्तको प्रतिस्थापन गरि बिभिन्न सामग्री निर्माण लागि आव्हान गरिएको थियो।
प्लाष्टिक कृत्रिम जैविक यौगिक हो अथवा सेन्थेटिक अर्गानिक कम्पाउण्ड हो । थोरै परमाणविक मास भएको कार्वन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, हेलोजन भएका अर्गानिक कम्पाउण्डलाई उत्प्रेरकको सहायताबाट पोलिमराईज गरेर बिशाल परमाणविक मास भएको लचकदार पदार्थको कृत्रिम संश्लेषण गरेपछि प्लाष्टिक बन्छ । प्लाष्टिक एक किसिमको लचकदार पोलिमर हो । यो लचकदार हुने भएकोले प्लाष्टिकलाई चाहिएको आकारमा सजिलै परिबर्तन गर्न सकिन्छ । प्लास्टिकको यो गुणलाई प्लास्टिसिटी भनिन्छ ।
प्लाष्टिक चाँडो नगल्ने, नसढ्ने गुणको कारण पर्यावरण र जनस्वास्थ्यका लागि भयंकर खतरा सावित हुंदै गइरहेको छ । मौसम, पानी, किरा, फटयांग्रा लगायत जीवाणु, विषाणु, लेउ, झ्याउ र ढुसी पनि यसलाई गलाउन असक्षम सावित भइसकेका छन् । अम्ल, क्षार, लवण लगायत अन्य रसायनहरूसंग क्रिया गराउदा पनि प्लाष्टिकलाई गलाउन नसकिने हुंदा प्लाष्टिकको फोहोर हाम्रो वातावरणमा दिन प्रतिदिन वढिरहेको छ । समुन्द्रको तट होस् वा हिमालय, मरुभूमि होस वा घना जंगल, तालतलैया हुन् वा नदि-नाला लापर्वाहीपूर्वक फ्याकिएका प्लाष्टिकको फोहोरले सुन्दर मनोहर दृश्य भएका यी प्राकृतिक संरचनालाई दिन प्रतिदिन कुरुप वनाउदै गइरहेको छ ।
‘प्लाष्टिक प्रयोगले जल र जमीनलाई सबैतिर प्रदूषित पारेको छ । खेत खन्दा प्लाष्टिक, गाईवस्तुको आन्द्रामा प्लाष्टिक, माछाको पेटमा प्लाष्टिक, प्लाष्टिकमा बेरिएर मरेका जलचर, प्लाष्टिकले निकास थुनिएर डुवान सामान्य बन्न पुगेका छन् । खास गरेर प्लाष्टिकको झोलाको अत्यधिक प्रयोग बहुआयामिक समस्या बनेको छ । विश्वमा प्लाष्टिक झोलालाई मुख्य वातावरणीय समस्याको रूपमा पहिचान गरेर समाधानका विभिन्न उपाय अबलम्वन भइरहेका छन् । प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगले मानिसमा क्यान्सर जस्तो भयानक रोग लाग्न सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्लाष्टिकवाट बनेका बोतलहरु कुहिन ४५० बर्ष वा सो भन्दा बढी बर्ष लाग्न सक्छ । यदि साधारणतया एउटा मानिसको आयू ७५ बर्ष मान्ने हो भने प्लाष्टिकवाट बनेका बोतलहरु कुहिन ६ पुस्ता मानिसको आयू बराबर समय लाग्छ ।
← बिजुलीको लाइन जाँदा पुरै नेपाल टेलिकमको सेवा अवरुद्ध, लापरबाही कसको ?
प्लाष्टिकको झोला, कप प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध नगरपालिकाहरु →
प्लाष्टिक प्रयोग घटाउने जनचेतनामूलक कार्यक्रम कामपाका ३२ वटै वडामा गर्नुपर्ने – पूर्वमन्त्री शाह
अप्रील 12, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
मार्च 21, 2018 मार्च 21, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
3 thoughts on “के हो प्लाष्टिक ? ४५० बर्ष कुहिन समय लाग्ने प्लाष्टिक बोतलको प्रयोग नगरौ”